Ukudla kanye iziphuzo, Ikhofi
Njengoba wazi, omnyama green tea - kungcono iziphuzo ehluke ngokuphelele. Uma kuqala aqinisekisayo ke yesibili, kunalokho, ukhuluphalisa. Kodwa uyini umehluko phakathi ikhofi omnyama oluhlaza? Izinhlamvu ziyafana. Kodwa wake wosa futhi ke grinded bendabuko isiphuzo abamnyama. Yini baphuze ikhofi green? Lapha ubuchwepheshe ihlukile. Isivuno sokusanhlamvu ngokushesha uya uncipha emabhodleleni. Khona-ke lo powder ukwenziwa isiphuzo. Kunengqondo umehluko encane, baphuze ikhofi noma pre-ethosiwe, ngomqondo ongokomfanekiso, okuluhlaza. Phela, kubalandeli i isiphuzo akhuthazayo hhayi umehluko kakhulu, ngoba ukunambitheka Cishe efanayo. Kodwa umzimba ...
umzimba wethu usabela ngokushesha nokubunjwa engavamile isiphuzo, ukubeka inyanga emibili kuya kwemine khilogremu isisindo okweqile. Iyini imfihlo kanye ikhofi green ezahlukene ngakho chemical izakhiwo kusuka black abakanye nawo abangamaJuda? Okusanhlamvu eluhlaza eziqukethwe esiningi chlorogenic acid. Lapho uxhumana caffeine, kuhle ukuba ngivule amafutha. Maye, lokhu acid ubalekela ngesikhatsi ngokucubungula ezishisayo okusanhlamvu. Labo abasele abanga-caffeine ukhuluphalisa futhi anika, sithuthukisa gipotonikam ingcindezi, kodwa kuphela nje. Cabanga indlela ukuphuza ikhofi green kwesisindo.
Ukubeka ilungelo ithe "i", kufanele bathi lokhu isiphuzo akuyona panacea. Uma ukuwaphuza ngamalitha, elele embhedeni, bayawuqhwaga okunama-kilojoule amaningi ukudla, isisindo, ngeke yehle, kodwa kumane kukhule. Ukuze kuzuzwe nomphumela ofiselekayo futhi babe slimmer, kubalulekile hhayi kuphela ukwazi ukuthi ukuphuza ikhofi green, kodwa futhi kuholele yokuphila asebenzayo. Ukwenza isiphuzo, ngasendleleni, kungaba ngakulahla nganoma iyiphi indlela eyaziwa. It is ukwenziwa Cezve, endebeni, e umshini ikhofi. Ungakwazi ukulungiselela i-espresso, Macchiato, cappuccino futhi American. Kubalulekile ukuze ihambisane nesimo eyodwa kuphela - musa ushukela. Uma ungakwazi ukuma ukunambitheka ikhofi ebabayo, indebe ngayinikela uju spoon.
Fans of the isiphuzo zakudala Kungenzeka uye waqaphela ukuthi ubhontshisi oluhlaza lona inqaba ezincane. Imajini caffeine endebeni zingandiswa ngokuthatha nezinkezo ezintathu powder ngalinye 200 ml amanzi abilayo. Nika isiphuzo isiphuzo. Abaningi impela abanesifiso sokwazi ukuthi kukangaki, nini futhi kanjani ukuze baphuze ikhofi green? Isiphuzo kudliwe imizuzu eyishumi ngaphambi kokudla main. Lokho, ngoba kule mpi ngokumelene isisindo okweqile udinga baphuze izinkomishi okungenani ezintathu yekhofi ngosuku. Kodwa ngemva kokudla ukudla akuyona kufiseleka, ngoba i-caffeine akuyona nomphumela omuhle kakhulu esiswini. It kuholela yokuthi emathunjini uthunyelwa ayikahlanganiswa kugaywe ukudla.
Kukhona enye indlela esingathola ukunciphisa umzimba esekelwe eluhlaza zekhofi. Lokhu Izithako isiphuzo-wezokudla edayiswa Pharmacy. Lihlanganisa guarana itiye eliluhlaza, izinongo, orange ebabayo, bromelain, pectin, L-carnitine. Konke lokhu izakhi kwandisa amandla wokulondolozwa lokushisa komzimba, bahlanza ubuthi, amavithamini, zenza amafutha. Indlela baphuze ikhofi green ingxube? Ngokusho imiyalelo ngaphakathi iphakheji. Ngaphambi kokuthatha amaphilisi, kuyoba ezidingekayo bonana nodokotela wakho kuqala.
Futhi yini Izimo evamile ikhofi green? Nse njengoba black bendabuko. Okungukuthi, ingasetshenziswa (okungenani ngokuvamile) nomfutho wegazi ophakeme cha, abaphethwe nokuqwasha futhi excitability kwemizwa, izingane, abesifazane abakhulelwe umunwe ntokazi. Ingabe ngiphuzela ikhofi green lihambisana namanye indlela yokudla ehambisana nempilo? Kungenzeka, kodwa hhayi nge usawoti-DRM. Caffeine esiphazamisayo ukususwa ketshezi, okuholela edema. Futhi zonke ezinye indlela yokudla ehambisana nempilo baphuze sithuthukisa umphumela kuphela.
Indlela baphuze ikhofi iced emazweni ahlukahlukene?
"Coffee House" imenyu, kanye nencazelo
Ngo itiye noma ikhofi-caffeine kakhulu? Kungakanani caffeine kwelinye inkomishi yekhofi?
Yini aphuze ubisi nge ikhofi noma ikhofi nobisi?
ISIHLOKO Iwebhusayithi Promotion
Gomel isekisi kusukela kwaqala namuhla